18 Dugsiyada Ilkaha ee Ugu Fudud ee La Geli Karo | US, UK, Canada 2022
Baro wax ku saabsan dugsiyada ugu fudud ee ilkaha si aad u hesho si ay kaaga caawiso fududeynta gelitaankaada dugsiga ilkaha oo aad u noqotid dhakhtarka ilkaha xirfad leh. Iskuulada ilkaha ee lagu soo ururiyey qodobkan waxay leeyihiin shuruudaha gelitaanka tacliimeed ee hooseeya iyo heer aqbalaad sare leh marka la barbar dhigo kuliyadaha kale ee ilkaha taas oo u sahlaysa ardayda qancisa shuruudahan inay galaan dugsiyada.
Ilkaha ama daawada ilkaha ama daawada afka laga qaato waa qeyb caafimaad oo koobeysa daraasada, ogaanshaha, kahortaga, iyo daaweynta cudurada, ciladaha, iyo xaaladaha daloolka afka. Qofka aqoon durugsan u leh cilmiga ilkaha iyo dhaqanka waxaa loo yaqaan dhakhtarka ilkaha.
Markaad qabtid arrimo ilkaha ah ama arrimo caafimaad oo saamaynaya ilkahaaga, dhakhtarka ilkaha ayaa ah meesha aad aadi lahayd si loo hagaajiyo. Waxaa jira xarumo caafimaad oo gaar ah oo loo yaqaan Xarumaha Daryeelka Ilkaha ama isbitaalo oo aad kula kulmi karto dhakhtarka ilkaha si loo daweeyo loona daryeelo ilkahaaga. Si aad u noqoto dhakhtarka ilkaha, waa inaad dhigataa iskuulka dhakhtarka ilkaha halkaas oo lagugu qalabeyn doono aqoon iyo xirfado aad ku noqon karto dhakhtarka ilkaha.
1 Waa maxay iskuulka ilkaha?
2 Waa maxay ugu yaraan GPA ee dugsiga ilkaha?
3 Waa maxay GPA ugu fiican dugsiga ilkaha?
4 Waa maxay kharashka aadista dugsiga ilkaha?
5 Immisa ayaan sameyn karaa dhakhtarka ilkaha?
6 Shuruudaha Dugsiga Ilkaha
7 Sida loo Codsado Dugsiga Ilkaha
8 5 Dugsiyada Ilkaha ee ugu Fudud ee Ingiriiska Soo Gala
8.1 Jaamacadda Dundee
8.2 Jaamacadda Aberdeen School of Medicine, Sayniska Caafimaadka, iyo Nafaqada
8.3 Dugsiga ilkaha ee Peninsula
8.4 Kulliyadda King's, London
8.5 Jaamacadda Queen's Belfast School of Medicine, Ilkaha iyo Sayniska Biyomediga
9 5 Dugsiyada Ilkaha ee ugu Fudud ee Kanada Gala
9.1 Jaamacadda Toronto, Kulliyadda Ilkaha
9.2 UBC Kulliyadda Ilkaha
9.3 Iskuulka Schulich ee Caafimaadka iyo Ilkaha
9.4 Jaamacadda Saskatchewan, Kulliyadda Ilkaha
9.5 Jaamacadda McGill Kulliyadda Ilkaha
10 5 Dugsiyada Ilkaha ee ugu fudud inay galaan Mareykanka
10.1 Jaamacadda Mississippi Dental School
10.2 LSU School of Ilkaha
10.3 Kuleejka Ilkaha ee Jaamacadda Ohio State
10.4 Jaamacadda Missouri-Kansas City of Dentistry
10.5 Kuliyadda Ilkaha ee Georgia
11 3 Dugsiyada Ilkaha oo leh GPA-da hooseeya
11.1 Kulliyadda Ilkaha ee Jaamacadda Howard
11.2 Dugsiga Caafimaadka Ilkaha ee Meharry
11.3 Dugsiga Ilkaha ee Herman Ostrow
Waa maxay iskuulka ilkaha?
Kani waa hay'ad sare ama qayb ka mid ah machad bara daawada ilkaha ardayda mustaqbalka, waxay horumarisaa kartidooda berrinka, waxayna ku qalabeeyaan xirfadaha saxda ah si ay u noqdaan dhakhaatiir ilkood oo xirfad leh.
Waa maxay ugu yaraan GPA ee dugsiga ilkaha?
GPA-da ugu hooseeya ee lagu barto iskuulka ilkaha waa 2.0 miisaanka 4.0
Waa maxay GPA ugu fiican dugsiga ilkaha?
Shuruudaha GPA way ku kala duwan yihiin dugsiyada oo dhan laakiin GPA-ga ugu fiican ee aad ku heli karto dugsiga ilkaha waa 3.5.
Waa maxay kharashka aadista dugsiga ilkaha?
Kharashka aadida iskuulka ilkaha ayaa ku kala duwan xarumaha, nooca ardayda, iyo wadamada laakiin badanaa waxay u dhaxeysaa $ 251,233 ilaa $ 600,000 mudo afar sano ah oo ah dugsiga ilkaha.
Immisa ayaan sameyn karaa dhakhtarka ilkaha?
Qaddarka lacagta ee dhakhaatiirta ilkaha sameeyaa sannad walba waxay kuxirantahay dalkooda iyo khibradooda, hase yeeshe, badanaa waxay u dhaxaysaa $ 195,210 ilaa $ 264,440. Way ka yaraan kartaa ama ka yaraan kartaa iyadoo ku xiran heerka dhaqaale ee dalka.
Shuruudaha Dugsiga Ilkaha
Shuruudaha gelitaanka ee dugsiyada ilkaha way ku kala duwan yihiin kulliyadaha iyo jaamacadaha, laakiin kuwa soo socdaa waa shuruudaha guud ee aad u baahan tahay inaad yeelato:
Shahaadada bachelor-ka ee ugu yaraan GPA ee 3.5 oo ka socota jaamacad la aqoonsan yahay ama kuleej iyadoo diiradda la saarayo cilmiga bayoolajiga, iskudhafka guud / kiimikada guud, kiimikada dabiiciga ah, ama fiisigis dhammaantood leh shaybaar iyo Ingiriis / qoraal degdeg ah
Ugu yaraan100 saacadood oo ah hadhka ilkaha
TOEFL, IELTS, ama imtixaan kasta oo aqoonta luuqadda Ingiriisiga ah ee ardayda caalamiga ah
Waraaqaha qiimeynta iyo talo bixinta
Dhibcaha imtixaanka gelitaanka ilkaha (DAT)
Qoraalka jaamacadda ama kuleejka ee daraasadda koowaad
Sida loo Codsado Dugsiga Ilkaha
Nidaamka dalabka ee lagu codsanayo iskuulka ilkaha ayaa ku kala duwan dal, hay'ad, iyo nooca ardayda (ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha). Si kastaba ha noqotee, barnaamijyadan waxaa inta badan lagu sameeyaa khadka tooska ah waxayna ardayda ka badbaadiyaan culeyska qabashada codsi fool-ka-fool ah.
Codsiga khadka tooska ah ee dugsi kasta oo ilkaha ah waa isku mid, badanaa waxay u baxaan sidan;
Si aad u codsato inta badan iskuulada ilkaha ee ku yaal Mareykanka, codsadayaashu waxay ku soo gudbin doonaan codsi khadka tooska ah iyagoo u maraya Adeegga Waxbarashada Ilkaha ee Mareykanka (ADEA) ee Adeegga Iskuulaadka Ilkaha ee Iskuxirka ah (AADSAS). mid kasta oo ka mid ah dugsiyada aad dooratay inaad codsato. ADEA AADSAS ma siiso aqbalida ardayda, waa masuuliyada hay'adaada martigelinta. dheeraad ah ka baro halkan
Si aad uga codsato iskuulka ilkaha ee Boqortooyada Midowday, codsadayaashu waa inay ka codsadaan UCAS, ma jiro dugsi ilkaha oo UK ah oo qaata codsadayaasha tooska ah. UCAS waxay aruurisaa, hubisaa, oo socodsiisaa ama u gudbisaa macluumaadka arjiga ardeyda dugsi kasta oo aad dooratay inaad codsato. Halkan ka eeg websaydhka UCAS.
Iyada oo dhammaan kuwan la nadiifiyey, waa waqtigii aan ku quusin lahayn mawduuca muhiimka ah oo aan sii dheerayn, aan aragno iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee galaya Maraykanka, Boqortooyada Midowday, iyo Kanada.
5 Dugsiyada Ilkaha ee ugu Fudud ee Ingiriiska Soo Gala
Jaamacadda Aberdeen School of Medicine, Sayniska Caafimaadka, iyo Nafaqada
Dugsiga ilkaha ee Peninsula
Kulliyadda King's, London
Jaamacadda Queen's Belfast School of Medicine, Ilkaha iyo Sayniska Biyomediga
Jaamacadda Dundee, Iskuulka Ilkaha ayaa ka mid ah iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee laga heli karo Boqortooyada Midowday waxayna u diyaarisaa ardayda dhakhtarka ilkaha iyo cilmiga caafimaadka afka nolosha xirfadeed iyo daraasadda qalin jabinta. Dugsiga ilkaha ayaa kujira 3rd ee Boqortooyada Midowday ee daraasaadka ilkaha.
Halkan, ardayda mustaqbalka waxaa la siiyaa fursado aad u wanaagsan oo loogu talagalay barashada heerarka shahaadada koowaad iyo koowaad. Kaliya ardayda ka socota Boqortooyada Midowday ayaa loo aqbalaa barnaamijkan ardayda kale ee caalamiga ah ma codsan karaan.
Booqo websaydhka barnaamijka
Kani waa iskuulka caafimaadka ee Jaamacadda Aberdeen wuxuuna ka kooban yahay Caafimaadka iyo Ilkaha dhismahan sare ee barashada. Waxaa la aasaasay 1497 waana mid ka mid ah iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee wax laga barto gudaha Boqortooyada Midowday.
Kulliyadda ilkaha ee halkan waxay ku bixisaa koorsooyin kala duwan oo ah shahaadada koowaad iyo heerarka qalin-jabinta ee daraasadda oo lagu bixiyo tas-hiilaad heer caalami ah oo ay bixiyaan shaqaalaha tacliinta Ardayda caalamiga ah way u furan yihiin inay codsadaan barnaamijkan.
Kani waa iskuulka ilkaha ee Jaamacadda Plymouth waxaana loogu talagalay in lagu bixiyo waxbarasho caafimaad oo fiican, kaqeybgal bulsho oo xoogan, iyo cilmi baaris heer caalami ah oo lagu soo bandhigo khibrada waxbarasho ee ardayga.
Halkan, waxaa jira siddeed shahaadada koowaad iyo jaamacadeed oo lagu baray barnaamijyo iyo barnaamijyo kale oo cilmi baaris ah oo ku saabsan masters-ka iyo heerarka dhakhaatiirta ee daraasadda oo la siiyay fursado waxbarasho oo waqti-buuxa ah iyo waqti-dhiman ah. Ardayda caalamiga ah looma aqbalo barnaamijkan laakiin ardayda UK ayaa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan.
Kulliyadda Ilkaha, Afka & Craniofacial Sciences waa dugsiga ilkaha ee King's College iyo sidoo kale mid ka mid ah iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee laga heli karo Boqortooyada Ingiriiska. Shahaadooyinka jaamacadeed iyo kuwa qalin-jabinta waxaa lagu bixiyaa halkan dhakhtarka ilkaha waxaana lagu siiyaa aqoon ilko oo ku saleysan caddayn leh khibrad caafimaad oo hore.
Ikhtiyaarrada wax lagu barto waxaa ka mid ah xerada, barashada masaafada ama barashada khadka tooska ah, iyo waqti-dhiman ardayda si ay u doortaan ikhtiyaarka iyaga ugu habboon. Dugsiga ilkaha wuxuu ka aqbalaa ardayda UK iyo dalal kale inay codsadaan oo ay helaan xirfado iyo aqoon ay ku shaqeeyaan hay'adooda ilkaha.
Iskuulka caafimaadka ee jaamacada Queens ayaa ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu fudud UK si loo soo galo, markaa waa wax iska caadi ah iskuulka ilkaha inuu ka mid noqdo iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee wax laga barto gudaha Boqortooyada Midowday. Dugsiga ilkaha wuxuu bixiyaa kaliya shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad wuxuuna ubaahanyahay 5 sano oo daraasad waqti-buuxa ah si loo dhamaystiro.
Dugsiga ilkaha wuxuu sidoo kale aqbalaa ardayda caalamiga ah laakiin sidoo kale waa tartan aad u sarreeya waana inaad ku qancisaa dhammaan shuruudaha tacliimeed ee loo tixgelinayo gelitaanka. Baro wax badan oo ku saabsan shuruudaha barnaamijka ilkaha adoo adeegsanaya xiriirka hoose ee hoose.
Haddii mid ka mid ah dugsiyadan ay ku qabtaan xiisahaaga, ku samee cilmi-baaris dheeri ah adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasha la bixiyay si aad wax badan uga ogaato shuruudaha gelitaanka iyo khidmadaha waxbarashada ee ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
5 Dugsiyada Ilkaha ee ugu Fudud ee Kanada Gala
Ma dooneysaa inaad wax ka barato ilkaha Kanada? Iskuulada hoos ku taxan waxay leeyihiin heerarka aqbalaadda ugu badan marka la barbar dhigo dugsiyada kale ee ilkaha ee Kanada, sidaa darteed, waxaad u baahan kartaa inaad iyaga ka codsato.
Jaamacadda Toronto, Kulliyadda Ilkaha
UBC Kulliyadda Ilkaha
Iskuulka Schulich ee Caafimaadka iyo Ilkaha
Jaamacadda Saskatchewan, Kulliyadda Ilkaha
Jaamacadda McGill Kulliyadda Ilkaha
Jaamacadda Toronto waa mid ka mid ah dugsiyada ugu sarreeya Kanada iyo adduunka, waxay samaysay mowjado, saameyn, waxayna ku biirisay dhinacyada sayniska, farshaxanka, iyo meheradda ganacsiga. Kulliyadda Ilkaha ee Jaamacadda Toronto waa dugsigeeda ilkaha oo waxaa la aasaasay 1875 si ay ardayda u siiso waxbarasho ilkeed oo tayo sare leh, kana dhigaysa iyaga dentiiste aqoon sare leh.
Kulliyaddu waa mid ka mid ah iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee lagu galo Kanada iyada oo heerka aqbalaadda ee 17.14% iyo illaa 610 ardayda ka diiwaangashan barnaamijyo heer qalin-jabineed iyo heer jaamacadeed ah. Shuruudaha aqooneed waxaa ka mid ah GPA ee 3.93 miisaanka 4.0 iyo kuwa kale oo aad ka heli karto xiriirka hoose ee hoose. Ardayda caalamiga ah sidoo kale waa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan
Kani waa dugsiga ilkaha ee Jaamacadda British Columbia wuxuuna siiyaa barnaamijyo ilkaha kala duwan ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee heerarka jaamacadeed iyo heerka dhakhaatiirta daraasadda. Waxay sidoo kale ka mid tahay iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee lagu galo Kanada iyada oo heerka aqbalaadda ee 13.65% iyo in ka badan ardayda 200 ee ku qoran barnaamijka.
Shuruudaha tacliimeed waa GPA ee 85.74% ilaa 88.46% ardayda caalamiga ahna waa inay qanciyaan shuruudaha aqoonta luuqadda Ingiriisiga.
Dugsiga Caafimaadka iyo Ilkaha ee Schulich waa iskuulka ilkaha ee Jaamacadda Western wuxuuna kujiraa iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee lagu galo Kanada oo leh heerka aqbalaada 12.99%. Dugsiga caafimaadka waxaa la aasaasay 1881 halka dugsiga ilkaha la aasaasay 1964 waxayna labaduba hada leeyihiin arday arday ah 1,800.
Dugsiga ilkaha wuxuu leeyahay barnaamijyo kala duwan oo loogu talagalay ardayda qalin-jabisa iyo kuwa qalin-jabiya oo ay ku jiraan barnaamijyada dhakhaatiirta. Shuruudaha tacliinta waxaa ka mid ah DAT dhibcaha 21 iyo ugu yaraan GPA ee 88.46% si aad u aragto shuruudaha kale, guji xiriirka hoose.
Tani waa mid ka mid ah iskuulada ugu fudud ee ilkaha ee lagu dabagalo shahaadada ilkaha ee Kanada, waxay leedahay heerka aqbalaadda 10% oo waxyar ka sarreysa marka loo eego dugsiyada kale ee ilkaha. Kulliyadda ilkaha waxay siisaa koorsooyin ilko oo kala duwan oo ah dhakhaatiirta iyo heerarka sare ee daraasadda ardayda iyo kuwa caalamiga ahba.
Shuruudaha gelitaanka waxaa ka mid ah ugu yaraan GPA ee 88.83% ee codsadayaasha gudaha iyo illaa 99.66% ee codsadayaasha caalamiga ah.
Kulliyadda ilkaha ee Jaamacadda McGill waa iskuulka ilkaha ee Jaamacadda McGill, mid ka mid ah hay'adaha ugu sarreeya Kanada iyo adduunka. Kulliyadda ayaa la aasaasay sanadkii 1904 si ay u tababarto una qalabeyso ardayda aqoonta ilkaha iyo xirfadaha wax ku oolka ah si ay ugu tababartaan aqoonyahanno ahaan.
Kulliyadda Ilkaha ee Jaamacadda McGill sidoo kale waa mid ka mid ah iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee lagu galo Kanada oo leh heerka aqbalaadda 11.07% waxayna leedahay in ka badan 500 oo arday oo ka diiwaangashan barnaamijka. Kulliyaddu waxay kaloo albaabada ufuraysaa ardayda ka timid dalalka kale laakiin shuruudaha gelitaanka ayaa loo dejiyay ardayda caalamiga ah.
5 Dugsiyada Ilkaha ee ugu fudud inay galaan Mareykanka
Mareykanku wuxuu caan ku yahay inuu heysto iskuulada ugu fiican adduunka wuxuuna xarun u yahay ardayda caalamiga ah sababo la xiriira shahaadooyinka tayada leh ee ay halkan ka bixiyaan hay'adaha. Iskuulada Mareykanka waa kuwo tartan badan iyadoo aan loo eegin anshaxa aad rabto inaad aado heerarkooduna badanaa way ka sarreeyaan kuwa waddamada kale.
Marka, waxaa jira suurtagal kasta oo ah in heerarka aqbalaadda ee dugsiyada ilkaha ee Mareykanka ay aad uga hooseyn doonaan kan Kanada iyo Boqortooyada Midowday. Iyo sida arday caalami ah, tani waa inay kaa caawisaa inaad go'aansato waddanka ugu fudud ee aad ku baran karto ilkaha.
Hoos waxaa ku yaal iskuulada ilkaha ee ugu fudud Mareykanka oo aad gasho:
Jaamacadda Mississippi Dental School
LSU School of Ilkaha
Kuleejka Ilkaha ee Jaamacadda Ohio State
Jaamacadda Missouri-Kansas City of Dentistry
Kuliyadda Ilkaha ee Georgia
Iyadoo heerka aqbalaadda ee 39.2%, dugsiga ilkaha ee Jaamacadda Mississippi waa mid ka mid ah iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee laga heli karo Mareykanka illaa iyo hadda waxay ku jiraan kuwa ugu sarreeya boostadan. Hoosudhaca kuliyadan ayaa ah inay dhif tahay inay tixgeliso ardayda caalamiga ah.
Jaamacadda Mississippi, Dental School waxay bixisaa barnaamijyo kala duwan oo u horseedaya bachelor-ka, mastarka, iyo shahaadada takhasuska. Qaar ka mid ah barnaamijyadu waa Nadaafadda Ilkaha, Endodontics, Ilkaha guud ee hormarinta, Ilkaha carruurta iyo Caafimaadka Afka Bulshada, iyo inbadan.
Barnaamijyadan dhexdooda, ardayda waxaa lagu qalabeeyay xirfado ay kaga fiicnaadaan cilmiga ilkaha, iyaga oo ka dhigaya kuwo xirfadlayaal ah isla markaana u qabta adeegyadooda bulshada iyo guud ahaan adduunka.
LSU School of Dentistry wuxuu ku yaalaa Louisiana waana mid caan ka ah aaga in sedex ka mid ah afartii afarta dhakhtar ilkaha ee ku dhaqan Louisiana ay ka qalin jabiyaan iskuulkan. Qiyaasta aqbalaadu waa 16.8% taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee lagu galo Maraykanka. Waxay ugufiican tahay deganayaasha Louisiana waxayna taageertaa barnaamijka ardayda caalamiga ah laakiin waxay leedahay meel aad u kooban oo loogu talagalay ardayda ka baxsan Louisiana.
LSU School of Dentistry waxaa la aasaasay 1972 waxayna ka qalin jabisay in ka badan 6,000 xirfadlayaal caafimaad oo ku takhasusay cilmiga ilkaha. Iskuulku wuxuu bixiyaa darajooyinka soo socda, Dhakhtarka Qalliinka Ilkaha, Bachelor of Nadaafadda Ilkaha, iyo shahaadada Associate ee Teknolojiyada Shaybaarka Ilkaha.
Tababarro kale oo heer sare ah ayaa la bixiyaa marka lagu daro barnaamijyadan waxbarasho, waxay kala yihiin:
Degenaanshaha Guud ee Ilkaha
Qalliinka Afka iyo Maxillofacial
Kulliyadda Ilkaha ee Jaamacadda Ohio State University waa tan afaraad ee ugu weyn iskuulada ilkaha dadweynaha ee Mareykanka, waxay leedahay toban qaybood oo tacliimeed oo matalaya takhasus gaar ah oo ilkaha ah. Waxaa jira in ka badan barnaamijyada 60 oo u horseedaya shahaadada mastarka iyo shahaadada jaamacadeed.
Qiyaasta aqbalaada halkan waxay ka badan tahay 14% taas oo ka dhigeysa mid ka mid ah iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee laga heli karo Mareykanka laakiin hoos u dhaca halkan ayaa ah in fasallada ay ka ballaaran yihiin barnaamijyaduna ay yihiin kuwo si dhakhso leh u socda.
Dugsigani waa mid ka mid ah iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee lagu galo heerka aqbalaada ee 14% laakiin hoos u dhaca halkan ayaa ah in dugsigu u baahan yahay shuruudaha tacliinta sare. Tusaale ahaan, si loo galo barnaamijka Dhakhtarka Qalliinka Ilkaha, shuruudaha tacliimeed waa celcelis ahaan GPA ee 3.6 iyo celcelis ahaan DAT dhibcaha 19.
Marka, inta heerka aqbalaaddu sarreeyo haddana waa inaad weli la kulantaa shuruudaha tacliimeed ee sare si aad ugu hesho gelitaanka kulliyadda. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ayaa ah inay si xoogan ugu dhiirrigeliso ardayda caalamiga ah inay codsadaan barnaamijka ilkaha.
Kulliyadda ilkaha ee Georgia waa dugsiga ilkaha ee Jaamacadda Augusta waxayna bixisaa laba darajo oo ilkaha ah oo ku takhasusay Dhakhtarka Ilkaha iyo laba darajo oo ku saabsan cilmiga afka. Heerka aqbalida dugsiga waa 13.8% taasoo ka dhigeysa mid ka mid ah iskuulada ilkaha ee ugu fudud ee la galo. Halka 90% codsadayaasha la aqbalay ay ka yimaadeen gobolka Georgia inta soo hartay 10% ay yihiin codsadayaal ka socda gobolada iyo wadamada kale.
Tani waxay muujineysaa in ardayda caalamiga ah sidoo kale la aqbalo laakiin aad u yar ayaa lagu aqbalaa fursada yar, tani waa mid ka mid ah faa'iidooyinka marka laga reebo inay ku siiso waxbarasho ilkeed oo diiradda saareysa daryeelka bukaanka iyo waxbarida wax ku oolka ah ee goobta caafimaadka. Faa'iido darrada ayaa ah inay jiraan barnaamijyo yar oo la xusho oo badiyaa loogu talagalay dadka deggan Georgia.
3 Dugsiyada Ilkaha oo leh GPA-da hooseeya
Dugsiga ilkaha waa qeyb ka mid ah iskuulada caafimaadka waxaadna horey u ogtahay in marka la eego edbinta u baahan GPA-ga sare si loo helo gelitaanka, daawada, iyo koorsooyinka caafimaadka liiska ugu sareeya, iyo dhakhtarka ilkaha looma reebin. Marka, guud ahaan, iskuulada ilkaha waxay u baahan yihiin GPA sare marka loo eego barnaamijyada kale ee aan caafimaadka ahayn, laakiin annaga oo ah Daraasaadka Dibadda ee Quruumaha ayaa baaritaan ku sameynay iskuulada ilkaha ee leh GPAs ka hooseeya wixii ay u baahnaayeen dugsiyada caadiga ah ee ilkaha.
Halkan, waxaan ku taxnay oo ka wada hadalnay iskuulada ilkaha ee leh GPA-yada hoose si kuwa kale ay u helaan iyo sidoo kale inay gacan ka geystaan ​​fududeynta gelitaankooda dugsiyada ilkaha. Si aad u gasho dugsiga ilkaha, waxaad u baahan tahay inaad haysato GPA ah 3.5 ama ka sareeya si aad u noqoto tartan laakiin waxaa jira dugsiyo ilkaha oo aad la geli karto GPA oo u dhexeysa 2.75 - 3.0, waxay hoos ku taxan yihiin:
Kulliyadda Ilkaha ee Jaamacadda Howard
Waxaa la aasaasay 1881 oo ku taal Washington DC, USA, loona aqoonsaday inuu yahay shanaad dugsiga ilkaha ee ugu da'da weyn Maraykanka, Jaamacadda Howard University College of Dentistry waa mid ka mid ah iskuulada ilkaha ee leh GPA hooseeya. Dugsiga ilkaha wuxuu ubaahanyahay iskucelcelis GPA ah 3.15 oo kamid ah shuruudaha tacliimeed ee badan.
Kuleejku waa machad daryeel caafimaad iyo bukaan oo bixiya daryeel bukaan oo tayo leh iyo adeegyo iyo sidoo kale waxbarasho ku dayasho mudan iyo cilmi baaris si loogu qalabeeyo ardayda si kor loogu qaado bukaan-jiifka, daryeelka iskaashiga, iyo u-doodista baabi'inta arrimaha caafimaadka.
Dugsiga Caafimaadka Ilkaha ee Meharry
Meharry waa kuleej caafimaad oo gaar loo leeyahay iyo Iskuulka Ilkaha waa iskuulka ilkaha ee jaamacada dhexdeeda oo bixiya afar shahaado oo ah Dhakhtarka Qalliinka Ilkaha. Iskuulka halkan ayaa lagu taxay sababtoo ah shuruudaha GPA ee hooseeya oo ah 3.16.
Dhammaan codsadeyaashu waa inay dhammaystiraan oo ay kasbadeen shahaadada bachelorka jaamacad ama jaamacad afar sano ah oo la aqoonsan yahay. Shuruudaha kale ee gelitaanka waxaa lagu bixiyaa xiriirka hoose.
Dugsiga Ilkaha ee Herman Ostrow
Tani waa dugsiga ilkaha ee Jaamacadda Koonfurta California oo lagu aasaasay 1897 oo ah iskuul ilkaha oo gaar loo leeyahay halkaas oo ardayda lagu tababaro shahaadada koowaad, heerka koowaad, iyo heerarka takhasuska ee daraasadda si ay u noqdaan dhakhaatiir ilkood oo xirfad leh.
Iskuulka Herman Ostrow ee Ilkaha wuxuu ubaahanyahay GPA hoose si uu ugoro ardayda 3.25 laakiin dhibcaha DAT ayaa sareynaya taas oo ah hoos u dhac. Barnaamijyada waxaa lagu bixiyaa khadka tooska ah iyo xerada dhexdeeda ardayda si ay ugu raaxaystaan ​​khibrada waxbarasho ee ugu fiican.
Kuwani waa dugsiyada ilkaha ee leh GPA-da hooseeya ee aad u baahan karto inaad dalbato haddii ay dhacdo inaad leedahay GPA hooseeya oo aad weli rabto inaad dhigato dugsiga ilkaha. Si kastaba ha noqotee, hoos u dhaca dugsiyadan ayaa ah in dhibcaha DAT ay badanaa ka sarreeyaan iyo shuruudaha kale ee gelitaanka sidoo kale waa kuwo aad u baahan.
Ku hel shuruudahaas adoo adeegsanaya xiriiriyeha la bixiyay si loo fududeeyo gelitaankaada, u soo ururi, oo aad ku bilowdo dalabkaaga waqtiga loogu talagalay. Ma jiraan dugsiyo badan oo leh GPA-da hoose ee daraasaadka ilkaha, wali waad u bilaabi kartaa kuwa halkan ku taxan ama waxaad aadi kartaa barnaamijyo kale oo caafimaad oo aan aad u baahnayn marka loo eego GPA.
5 Fudud Oo Fudud Oo Shaqada Gurigaaga Ku Sii Soomi Doona
25 Jaamacadaha Sare ee Kanada ee loogu talagalay MBA
10 Jaamacadaha Sare ee Shiinaha loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
dugsiyada ilkaha oo leh GPA hooseeyaiskuulada ilkaha ee ugu fudud ee la galoiskuulada ilkaha ee ugu fudud ee laga soo galo Kanadaiskuulada ilkaha ee ugu fudud ee laga soo galo UKiskuulada ilkaha ee ugu fudud ee laga helo Mareykanka
Previous Post:15 Kulliyadaha Sare ee Dowlada Kanada
Post Next:10 Waxyaabaha Lagu Sameeyo Degree Degree
Pingback: 3 -da dugsi ee ilkaha ee ugu sarreeya Florida ee sameeya shaqooyinka ilkaha